Demi Devonne Lovato (Dhalatay 20 Agoosto, 1992dii) Waa Gabadhfanaanad ah oo u dhalatay dalka Mareykanka, sidoo kale Lovato waa oo Filin jila ah. Demetria Devonne Lovato (/ ləvɑːtoʊ / lə-Vah-toh; dhashay August 20, 1992) waa fanaan Maraykan ah, heesaha heesaha iyo actresska. Ka dib markii uu ka soo muuqday cajaladda telefishanka ee Barney & Friends ilmaha yar, waxay heshay doorka weyn ee Mitchie Torres ee filimka Disney Channel television Camp Rock (2008) iyo guushii Camp Rock 2: Jamhuuriintii ugu dambaysay (2010).
(1992-08-20) Agoosto 20, 1992 ( 27jir)
2002–2017 (hiatus starting 2017)
Taniyo markii aan la saxiixanay Records Hollywood, Lovato wuxuu sii daayay albaabkii ugu horeeyay ee Studio Studio Doow Forget (2008), waxaana soo raacay shan cajaladood oo dheeraad ah: Halkan waxaan mar kale dib ugu laabannaa (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) iyo Ii Ii Jiraan (2017). Lovato wuxuu soo galay todoba labaatan jimicsi oo ku qoran US Billboard Hot 100: "Tani waa Me", "Halkan ayaanu maraynaa", "Skyscraper", "Qulqulka Wadnahaaga", "Heart Attack", "Cool for Summer" , iyo "Sorry for Sorry". Dhibaatada telefishankeeda, Lovato ayaa u muuqday dabeecad jilicsan on Sonny oo leh Fursad laga bilaabo 2009 ilaa 2011; waxaa loo yaqaanaa garsoore iyo khibrad ku saabsan nuqulka Maraykanka ee X Factor ee 2012 iyo 2013; oo wuxuu u muuqday dabeecad soo noqnoqonaysa Glee. Dhibaatooyinka ay la leedahay xanuunka laba-cirifoodka ah, qabatinka, cunno xumida, iyo is-gaarsiintu waxay heleen feejignaan weyn oo warbaahineed 2010-kii, iyada oo ay ka jawaabtay taas oo ay sii daysay buugga "Staying Strong": 365 Maalin Sannad (2013) iyo dukumenti YouTube ah oo ku saabsan nolosheeda iyo xirfad, oo cinwaankeedu yahay Demi Lovato: Simply Complicated (2017).
Lovato waa pop,  dhagax weyn,  iyo farshaxanka R & B.   Lovato ayaa helay abaalmarino abaalmarin ah, oo ay ku jirto MTV Video Music Prize, 13 Abaalmarinta Doorashada Dhalinyarta, Abaalmarinta Shanta Abaalmarinta Dadka, Abaalmarinta ALMA iyo Abaalmarinta Laatiin Ameerika. Marka laga reebo warshadaha madadaalada, Lovato waxa uu ku lug lahaa dhowr waxyaalood bulsho iyo deegaaneed tan iyo markii uu bilaabay xirfaddiisa. Bishii Maajo 2013, waxaa lagu soo bandhigay iyada oo loo adeegsanayo hagaha dhalinta iyo dhalinyarada qaangaarka ah ee qaba cilladaha caafimaadka maskaxda ee Maalinta Wacyigelinta Caafimaadka Maskaxda Carruurta ee Washington, D.C. Waxay sidoo kale noqotey u doodaha bulshada LGBT. Sannadkii 2014, waxay noqotay wajiga loogu talagalay Ololaha Xuquuqda Aadanaha ee Maraykanku u leeyahay Ololaha Sinnaanta Guurka. [
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Demi_Lovato&oldid=179959"
Last edited on 8 Sebteembar 2018, at 09:53
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Sebteembar 2018, marka ee eheed 09:53.